Creative Writing » ကလေးတို့အဖေ ကျွန်တော်	26
ခင်ဇော် says: သနားထာ အေရယ်။
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်တယ် မြေးရနေပြီ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2898
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟီး ဟီး… ခွေးမွေးတာတော့မမြင်ဖူးဘူးဗျ …
အောင် မိုးသူ says: လူမွေးတာတော့မြင်ဖူးသေးဘူး အူးကျောက်။ ခွေးမွေးတာတော့ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းပဲ။ ခိခိ။
Alinn Z says: နီပဲ နို့တိုက်ခဲ့ရတာပေါ့နော်
အောင် မိုးသူ says: လူသားဆိုတာ မေတ္တာစေတနာတွေ အပြည့်နဲ့ လူသားလေ ဒညင်းဝက်ရဲ့။
Ma Ei says: ကြာညိုပန်းဆေးခန်းက အန်တီအိတို့ နဲ့ နီးပါတယ်….
အောင် မိုးသူ says: ဟုတ်လား တီအိ တောင်ဥက္ကလာစာတိုက်ကလေ။ တီအိက ဘယ်နှရပ်ကွက်လဲ။ ကျွန်တော်က (၇)ရပ်ကွက်မှာနေတာ။
Ma Ei says: တီအိက (၆) ရပ်ကွက် Feel နဲ့ ကျောကပ်လမ်းမှာပါ…
အောင် မိုးသူ says: သြော် နီးနီးလေးပဲ Feel ကို အရင်က လာနေကြပဲလေ။
Kaung Kin Pyar says: ခွေးတော့ အရမ်းချစ်တာ…
Ma Ma says: တကယ့်ကို ၀မ်းနဲ့မလွယ်ရုံတမယ် ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ မွေးခဲ့ရတာပဲ။ အိမ်မှာ ခွေးမမွေးဖူးဘူး။
မောင်လေးနင်းမိလို့ သူ့ကို ၀က်ပိ လို့ နာမည်ပေးလိုက်ကြတာ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အိမ်က ကြောင်မမွေးပေမယ့် ကျန်တဲ့အိမ်က ကြောင်တွေက ကျွန်တော်တို့အိမ်ကို တအားကပ်တယ်။ ခုတော့ ဘာမှ မမွေးဖြစ်သေးဘူး။ မွေးဖို့တော့ အစီအစဉ်ရှိတယ်။
Mr. MarGa says: ငမ့် တော်သေးသပေါ့
အောင် မိုးသူ says: အထီး ၃ကောင် အမ ၂ကောင်
naywoon ni says: အိမ်း ကမ္ဘာ​ကျော်​ စာ​ရေးဆရာဆိုတာ ​ခွေး​လေး​ကြောင်​​လေး အ​ကြောင်း​ရေးလဲ ဖတ်​လို့​ကောင်းတာပဲတဲ့ ဘူလဲမသိ ​ပြောသွားတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: ရွာထဲက စာရေးသူအချို့ကို မမီသေးဘူး ခိခိ
manawphyulay says: ဒါဆို တစ်ဆင့်ထပ်တက်ပြီးကော ခေါ်သေးလား မြေးခွေးတို့အဖေဆိုပြီးတော့လေ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 7194
Mike says: .သံယောဇဉ်များလို့ ခွေးရောကြောင်ရော မမွေးဘူး…
အောင် မိုးသူ says: သံယောဇဉ်တော့များတယ်ဗျာ………။ အဲသည်အကြောင်း ထပ်ရေးပါဦးမယ်။
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟင့်…. ခေး အဲ. ခွေးလိုချင်ပါတယ်ဆို… ရုံးမှာလည်း မမွေးဖြစ်သေးတော့ ကိုယ့်မှာ မျှော်နေရတာ… ဟိုတစ်ယောက်ကိုတောင် ပြောမိသေး.. နာတုိ့ ခေးမမွေးဘဲ ခွေးမွေးကြမားလို့.. ဟိဟိ.. မြေးလေးတွေပုံ ကြည့်ချင်တယ်…
အောင် မိုးသူ says: မြေးလေးတွေအကြောင်းရေးရဦးမယ်။ သံယောဇဉ်တွေလေ….။
မြစပဲရိုး says: ခွေးကို ဗိုက်ခွဲမွေးတဲ့ ဇာတ်လမ်း ဒါပထမဆုံး သိဘူးတာဘဲ။
အောင် မိုးသူ says: ခွေးလေးတွေအကြောင်းတော့ တစ်ခုထပ်ရေးဦးမယ်။ ကျိန်းကျေလည်း ကျေပါစေတော့ ကျွန်တော်က ကိုယ့်တူနဲ့တူမတွေရယ် ဆွေမျိုးနဲ့ကလေးတွေကိုသာ ပံ့ပိုးသူဖြစ်ချင်တယ်။ မိန်းမ မရလည်း နေပါစေတော့လို့ မှတ်ယူပြီးသားရယ်။ ဟိဟိ
မွသဲ ( 17082011 ) says: အယ်ချစ်စရာလေးတွေနေမှာနော်။ အခုကဲကဲရှိသေးလား။ ဒါ့ပုံလေးတွေပါရင်ပိုကောင်းမယ်
အောင် မိုးသူ says: ကဲကဲတော့မရှိတော့ဘူး။ အဲ့တုန်းက ဖုန်းတောင်မပိုင်ဆိုင်သေးတဲ့ဘဝဆိုတော့ မှတ်တမ်းမှတ်ရာလေးတွေလည်း မရှိတော့ဘူး တီမွရေ။